Waftigii Ugu Danbeeyay Ee Kasocday Marti Sharafta Xisbiga Talada Haya Ee EPRDF Oo Maanta Yimid Magaalada Jigjiga. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Jimce.Oct.03.2014, Taniyo shalay waxaa magaalada Jigjiga soo gaadhaya waftiyada kasocda marti sharafta kala duwan ee kaqayb galaya shirwaynaha 8aad ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya(XDSHSI).
Waxaa maanta xarunta Jigjiga yimid waftigii ugu danbeeyay ee kasocday marti sharafta ka imanaysa xisbiga talada dalka haya ee EPRDF kuwaas oo isugu jiray masuuliyiin sare oo kamida ururka EPRDF. Gudoomiyaha xisbiga ahna afhayeenka baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq ayaa masuuliyiinta ku marti qaaday inay kasoo qayb galaan shirwayanaha.
Shirwaynaha 8aad ee XDSHSI oo kadhacaya xarunta gobolka Nogob ee Fiiq oo maal mahan diyaar garowgiisii lagu jiray ayaa bilaabanaya 25 ilaa 27 bisha meskerem ee haatan lagu jiro. Waxaana lagu wadaa inuu shirwaynahani socdo muddo 4 ilaa 5 cisho ah.